Google Glass ကိုနောက်ကျောဖြစ်ပါတယ်! - သတင်း Rule
Google Glass ကိုနောက်ကျောဖြစ်ပါတယ်!
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Google Glass ကိုနောက်ကျောဖြစ်ပါတယ်! ယခုမူကားကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဖွင့်?” အဲလက်စ် Hern ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com သောကြာနေ့ဇူလိုင် 31 ရက်တွင်အဘို့ 2015 14.19 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Google ကတိတ်တဆိတ်၎င်း၏ဝတ်ဆင်ကွန်ပျူတာရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သည်, ဖန်, ထိုကဲ့သို့သောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖြစ်စက်မှုလုပ်ငန်းရည်ရွယ်သည့်လုပ်ငန်း-အာရုံစူးစိုက် device ကိုအဖြစ်, ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စွမ်းအင်.
အဆိုပါကြေညာသွားမည်ဖြစ်ပြီးပြန်လည်စတင်, Wall Street Journal မှနေဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်, အသစ်တစ်ခုကိုစားသုံးသူဗားရှင်းဖြင့်တစ်နှစ်အကြာတွင်နောက်တော်သို့လိုက်နိုင်. ယခုမူကားများအတွက်, device ကိုတစ်ဦးခေါင်းကို-တပ်ဆင်ထား display ကိုရှိခြင်းကနေချက်ချင်းတန်ဖိုးကိုရယူခံစားသောသူစီးပွားရေးဖောက်သည်များမှာသီးသန့်ရည်ရွယ်, နှင့်ပြဿနာများကိုအများအပြားရှောင်ကွင်းစားသုံးသူအသုံးပြုသူများတွေ့ကြုံ, အများပြည်သူနေရာများတွင်တစ်ဦးခေါင်းကို-တပ်ဆင်ထားသည့်ကင်မရာကိုဝတ်ဆင်ထားခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေခဲ့သည်အထူးသဖြင့် privacy ကိုစိုးရိမ်ပူပန်.
အဆိုပါပြန်လည်စတင် Google က device ကိုအလိုတခုတည်းကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ရုံခြောက်လနောက်ကြွလာ ထုတ်လုပ်မှုငြိမ်း "ပစ္စုပ္ပန်အတွက် form ကို". ဒါကကြေငြာချက်ကို Google က၎င်း၏အနာဂတ်နည်းပညာ X ကိုဌာနခွဲထဲကနှင့် iPod ကိုနောက်ကွယ်ကလူကိုကဦးဆောင်တစ်ခုလုံးသီးခြားကွဲပြားခြင်းသို့အဖွဲ့ရွေ့လျားသည်ကိုမြင်, တိုနီ Fadell.
အဆိုပါလှုပ်ရှားတဲ့ "ကျောင်းဆင်းပွဲ" အဖြစ် Google ကကြေငြာခဲ့သည်, ကတည်ရှိအဖြစ်ဒါပေမယ့်လူအများအစားစက်ပစ္စည်းအတွက်ဦးသေဆုံးပြီးတစ်ဦးမသနားတျောမူအဖြစ်မြင်, lackluster စားသုံးသူတုန့်ပြန်အစဉ်အမြဲ-ပစ္စုပ္ပန်ရဲ့ privacy ပြီးနောက်ပြဿနာများကိုလူထုများ၏မျက်စိထဲမှာစိတ်ကူး soured - နာမည်ဆိုးအ coinage မှဦးဆောင် "glasshole"Google Glass ကို wearer တစ်အချို့သောအမျိုးအစားကိုဖော်ပြရန်.
Glass ကို၏ကနဦးလွှတ်ပေးရန်ရုံအဆိုပါကိစ္စရပ်များကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့. တစ်ဦး "စားရှာဖွေသူ" အစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ရောင်းချခဲ့ရ, ကနဦးအဘို့ ,500 တစ်စုံ, ကုမ္ပဏီအအသုံးပြုသူများချောစားသုံးသူထုတ်ကုန်ဝယ်ယူမဟုတ်ခဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြေးပေါင်သန်းခဲ့သည်. သို့သော်ပေါ်က, ကယျြပွနျ့စှာ Glass ကိုရာထူးတိုး, နည်းပညာအတွက်ရှေ့လျှောက်လမ်းပေါ်မှာမော်ဒယ်ဒိုင်ယာလော့ နောက်ဆုံးမှာမှစျေးနှုန်းဖြတ်တောက် 0.
စားသုံးသူ preview ကိုအနည်းငယ်မအောင်မြင်ခဲ့စဉ်တွင်, ထိုသို့ကုမ္ပဏီမှသတ်သတ်မှတ်မှတ်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအခင်းအကျင်းအတွက်ပစ္စည်းတွေသုံးပြီး၏အလားအလာဖျောပွခဲ့. အများစုဟာအထူးသ, device ကိုခွဲစိတ်ခြင်းဖြင့်မွေးစားခဲ့သည်, အသံတစ်သံ-Control ၏ကမ်းလှမ်းမှုကိုဘယ်သူကိုများအတွက်, လက်ကို-အခမဲ့မျက်နှာပြင်သိသာအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိထားသူ.
Sony က SmartEyeglass စမတ်မျက်မှန်နှင့်အတူ Google Glass ကို outdo ရည်ရွယ်
Google Glass ကိုပြန်လာကြနိုင် - ဒါပေမယ့်ပထမလေးကြီးတွေအခက်အခဲများကိုရှင်းလင်းရမယ်
20697	1 အဲလက်စ် Hern, အပိုဒ်, Google က, Google Glass ကို, သတင်း, နည်းပညာ, ဝတ်ဆင်ကနည်းပညာ
← 3D ကိုဦးနှောက်မြေပုံကို Nano-စကေးရှိဆဲလ်များအကြားဆက်သွယ်မှုကိုထုတ်ဖော်ပြသ ကျနော်တို့သက်ကြီးရွယ်အိုသို့နုပျိုသောအသွေးကိုချပြီးအားဖြင့်အိုမင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို reverse နိုင်သလား? →